Bhaibheri Rinotii Nezverunako?
Zvatinofunga nezverunako zvinogona kuita kuti tigare tichifara kana kuti tichinetseka.
Sei tichikwanisa kuona kunaka kwakaita chimwe chinhu?
Hazvisati zvava kuzivikanwa kuti pfungwa dzinoshanda sei kuti tikwanise kuona kunaka kwechimwe chinhu. Bhaibheri haritsananguri kuti izvi zvinoitika sei, asi rinoti kusikwa kwatakaitwa nemufananidzo waMwari ndiko kunoita kuti tikwanise kuona runako rwechimwe chinhu. (Genesisi 1:27; Muparidzi 3:11) Zvakaita chimiro chedu uye mashandiro anoita muviri zvinoshamisa. Mumwe munyori wenziyo akararama kare akati: “Ndichakurumbidzai [Mwari] nokuti ndakaitwa nenzira inoshamisa, inotyisa.”—Pisarema 139:14.
Asi mazuva ano vanhu vava kunyanya kukoshesa nyaya yerunako uye ndizvo zviri kukurudzirwa nevanoita zvefashoni, vemapepanhau nepaTV. Rimwe bhuku rinonzi Body Image, rinoti, kune dzimwe nyika “kana munhu asina kunaka anozvitarisira pasi kunyange aine hunhu.” Zvakaita mwoyo wemunhu ndizvo zvinotonyanya kukosha, asi mafungiro azere munyika anoita kuti vanhu vasazviona.—1 Samueri 16:7.
Vanhu vakawanda vanonyanya kukoshesa runako uye kukwezva kunoita munhu
Chimwezve panyaya yekuva nechimiro chakanaka kukurudzirwa kuri kuitwa vanhukadzi kuti vakwezve varume. Ongororo yakaitwa nesangano reAmerican Psychological Association (APA) muna 2007, “yakaratidza kuti vanhukadzi vanoita zvinhu zvinokwezva.” Bhaibheri rinotinyevera zvakasimba kuti tisava nemafungiro akadaro uye kutevedzera zvarinotaura kunobatsira!—VaKorose 3:5, 6.
“Kushonga kwenyu ngakurege kuva kwokunze, . . . asi ngakuve munhu akavanzika womwoyo akapfeka chipfeko chisingaori chomudzimu wakanyarara uye munyoro, uyo unokosha kwazvo pamberi paMwari.”—1 Petro 3:3, 4.
Sei usingafaniri kunyanya kuzvinetsa nenyaya yerunako?
Vamwe vanoti: “Kana wakanaka, varatidze!” Munzvimbo dzine vanhu vane mafungiro aya, vasikana vari kuyaruka nevamwe vanenge vachiri vadiki vanotanga kuzviona sekuti miviri yavo iripo kuti ‘ifadze vamwe vanhu, vayemurwe uye vaudzwe kuti vakanaka zvakadini,’ rinodaro sangano reAPA. Mafungiro akadaro anogona kukuvadza zvikuru. Ari kuita kuti vanhu vasagarisana zvakanaka uye ari kutokonzera zvirwere. Sangano reAPA rinotiwo zvinogona “kukanganisa mafungiro emunhu.” Munhu anogona kupedzisira ava kuzvidya mwoyo uye ‘ava nedambudziko pakudya, ava kuzvitarisira pasi, ava kuzviona seanosemesa uye aora mwoyo.’
“Bvisa zvinonetsa pamwoyo wako, udzivise dambudziko panyama yako; nokuti uduku noupwere hazvina zvazvinobatsira.”—Muparidzi 11:10.
Chii chinoratidza kuti munhu ane pfungwa dzakanaka?
Bhaibheri rinoratidza kuti kuva “nepfungwa dzakanaka,” kunofambidzana nekuva nemwero. (1 Timoti 2:9) Funga zvinotevera: Vanhu vane mwero havanyanyi kuzvinetsa nezvakaita chimiro chavo. Havangotsvaki zvakavanakira asi vanofungawo kuti vamwe vanozviona sei uye izvi zvinoita kuti vayemurwe, varemekedzwe uye chinotonyanya kukosha, vafarirwe naMwari. (Mika 6:8) Vanhu vane mwero vane mukana wakakura wekuwana shamwari dzechokwadi uye wekuzoroorwa nevanhu vasingatarisi runako rwemunhu chete asi vanoda kugarisana navo kweupenyu hwese vachifara.
Ndosaka Bhaibheri richiti chinhu chinonyanya kukosha chatinofanira kufunga nezvacho “munhu akavanzika womwoyo.” (1 Petro 3:3, 4) Unhu hwakanaka hahuperi nekukura, asi kuti hunotowedzera kunaka nekufamba kunoita nguva! Zvirevo 16:31 inoti, “Kuchena musoro ikorona yorunako pakunowanikwa munzira yokururama.” Vanhu vanoteerera mazano eBhaibheri, vangava vakura kana kuti vechidiki, vachagara vaine hunhu hwakanaka, vachiremekedzwa nevamwe uye vachagutsikana.
“Chimiro chinganyengera, uye kunaka kungasabatsira; asi mukadzi anotya Jehovha ndiye anorumbidzwa.”—Zvirevo 31:30.